Kedu ihe bụ SEO kacha mma maka ecommerce saịtị?
Nyochacha njirimara search bụ mpaghara na-agbanwe agbanwe mgbe nile na-achọ nhazi atụmatụ na ụzọ dị mma. E kwesiri ilebara anya nke oma na weebụsaịtị ndi e-commerce - usoro nke nyocha omimi bu uzo o di mgbagwoju anya. Ebe ọ bụ na e-azụmahịa SEO ọrụ n'okpuru ọnọdụ dị iche iche nke ọnọdụ, ọ ga-arapara na ụfọdụ set nke omume - manuale duso termostato perry. N'isiokwu a, m ga-agwa gị banyere usoro SEO kachasị mma kwesịrị itinye aka mee ka ọrụ ọrụ weebụ ahụ ecommerce. Ntre, nso ikpere.
Ọkaibe Backlink Analysis
Analysis of competitor's backlinks is a method effective na SEO nke na - enyere gị aka inweta echiche na inweta njikọ dịka azụlinks nke ndị na - asọ mpi. Site n'inyocha njikọ onye na-asọmpi, ị nwere ike ịchọpụta usoro, ohere, na nsogbu ndị chọrọ mgbanwe. Ị nwere ike nyochaa njikọ ndị ọkachamara site n'iji ụdị SEO ndị dị otú ahụ dị ka Majestic ma ọ bụ Moz's Open Site Explorer. Ntughari backlink analysis bụ atụmatụ zuru ezu SEO na-enye e-azụmahịa na saịtị nwe ya na nghọta na onye na-asọmpi njikọ ụlọ arụmọrụ.
Mkpa nke Snippets Featured
N'okwu dị mfe, snippet a na-egosipụta bụ azịza dị nkenke ma dị nkenke nyocha ọchụchọ onye ọrụ. A na-etinyekarị snippet na elu nke nsonaazụ ọchụchọ. Mpempe akwụkwọ ndị na-apụta ìhè na-enyere aka ịchọta visibilụ ọchụchọ. Iji nweta snippets maka saịtị gị, ị ga-ahụ otu ajụjụ nke atụmanya gị na-achọkarị. Ozugbo ịchọtara nke a, gbalịa inye azịza doro anya maka ajụjụ ọchụchọ.
Mgbe ọ na-abịakwute mgbasa ozi weebụsaịtị, ndị na-azụ ahịa na-elelị ma ọ bụ ọbụna na-eleghara ọrụ obodo anya n'enweghị ihe kpatara ya. Cheta, mma ị mara ndị ahịa gị, mma ị nwere ike ịkwado gị ika. Gbalịa chọpụta ọtụtụ ihe gbasara ha, dị ka o kwere mee. Lekwasị anya na ịchọta ndị ọkachamara kacha mkpa na obi abụọ. Enwere ike ime nke a n'elu ikpo okwu ebe ndị na-ege gị ntị na-akpakọrịta. Chọọ ebe Q & A dị ka Reddit ma ọ bụ Quora ebe a na-atụle ajụjụ ndị gbasara ọrụ gị.
Onye na-ewepụta akwụkwọ
Bọọgụ ndị ọbịa bụ atụmatụ dị mma nke ndị nwe ụlọ ọrụ nwe obodo na-emekarị iji mụbaa ma okporo ụzọ na ahịa. Mgbe ị kwenyere ide akwụkwọ maka onye ọzọ blog, ha abụọ na-erite uru: onye nwe ụlọ ọrụ nke ọzọ nwetara ihe ọhụrụ site n'aka onye edemede ọhụrụ, ị ga-enwekwa ohere maka azụmahịa gị. Jide n'aka na onye nwe saịtị ahụ ịdere maka ekwenye na ị ga-ejikọta na peeji nke gị. N'ụzọ doro anya, ị ga-eme nke a maka onye ọ bụla dere maka gị. Gbalịa ịbịakwute weebụsaịtị ndị a ma ama na ndị a ma ama na ụlọ ọrụ gị ma rịọ maka ohere izipu ozi ndị ọbịa.
Tinye usoro SEO ndị a maka saịtị ecommerce n'ime ọrụ ma mee ka mmelite dị mkpa dị ka azụmahịa gị.Ọ dị mkpa ka ị ghọta na nsogbu ndị metụtara atụmatụ SEO e-azụmahịa bụ ihe pụrụ iche maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Cheta na ọ bụrụ na emee ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-ahụ nnukwu ọganihu na okporo ụzọ na ụzọ SEO ndị ọzọ.